धन, बुद्धि र व्यापार वृद्धि गर्न बुधबार कुन भगवानको व्रत बस्ने ? – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on धन, बुद्धि र व्यापार वृद्धि गर्न बुधबार कुन भगवानको व्रत बस्ने ?
दुबै जना एकअर्कासित झगडा गर्न थाले । त्यसै बेला राज्यका सिपाहीहरू आएर त्यो पानी लिन जाने अमखोरा लिएको व्यक्तिलाई समात्न खोज्दै त्यस स्त्रीलाई सोध्छन् – यी दुईजना मध्ये तिम्रो असली पति चाहिँ कुन हो ? त्यसपछि त्यस स्त्रीले जबाब दिन सक्दिन । किनभने दवै व्यक्तिको सम्पूर्ण स्वरूप एकै किसिमको हुन्छ । बिचरी त्यस स्त्रीले कसलाई आफ्नो पति भन्नु, अल्मल्ल परिन् । अनि ईश्वरसित प्रार्थना गर्दै भन्छिन्, ‘हे ईश्वर यो के विचित्रको लीला हो।’ त्यस स्त्रीको वास्तविक पति पनि ईश्वरलाई पुकारर्दै रुन कराउन थाल्छ ।
← छाउपडी हटाउन सरकारको कडा निर्देशन, नहटाए सुविधा रोकिने → श्रीदेवीसँग काम नगरेकोमा खुसी छन् करण जोहर, बताए यस्तो कारण